Yaa ugu Cad cad Doorashada Gudoomiyaha Aqalka sare iyo kuxigeenkisa koobaad ?(Warbixin) - iftineducation.com
Yaa ugu Cad cad Doorashada Gudoomiyaha Aqalka sare iyo kuxigeenkisa koobaad ?(Warbixin)
iftineducation.com – Waxaa maalinta berito ah oo ku beegan 22-ka bisha Janaayo lagu wadaa in magaalada Muqdisho ka dhacdo doorashada Gudoonka Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xilkaasi isku soo sharaxay Musharixiin dhoor ah.
Doorashada Gudoonka Aqalka sare ayaan xiiso sidaa u badan laheyn marka loo eego doorashadii Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo labadiisa kuxigeen ee ka dhacday magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo asteeyay Beelaha dega gobolada Waqooyi ee Soomaaliya, waxaana kursigaasi isku soo sharaxay labo Musharax oo kasoo jeeda Somaliland.
Waxaa ugu cad cad lagana yaabaa in Gudoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamanaka Somaaliya loo doorto Cabdi Xaashi Cabdulahi oo horey uga mid ahaa Baarlamaanka Waqtigiisa dhamaaday, Siyaasigan oo rug cadaa ah ayaana la saadaalinayaa in kursigan uu kusoo bixi karo.
Tartanka Kursiga Gudoomiye kuxigeenka koobaad ee Aqalka sare ayaa isna ah mid aad u adag, waxaana kursigan ku tartamaya Musharxiin saameyn badan ku leh Siyaasada , waxaana mushartaxiintan ay taageero dadban ka helayaan dhinacyo kala duwan.
Musharaxiinta ugu cad cad lagana yaabo in midkood ku guuleesto Kursiga Gudoomiye kuxigeenka koobaan ee Aqalka sare waxaa ugu horeeya Senetor Cabdi Axmed Dhuxulow (Dhagdheer) oo la sheegay in uu taageero ka helayo Madaxtooyada Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale Kursigan tartankiisa uu adag yahay laga yaabaa in ay kusoo baxaan Senetaro kale ay kamid yihiin Abshir Maxamed Axmed(Bukhaari) oo katirsan Xisbiga Daljir iyo sidoo kale Siyaasiga rug cadaaga Cabdirisaq Cusmaan Xasan Jurille oo kasoo jeeda Puntland.
Musharaxiinta ayaa si xoogan ololahooda uga wada Hoteelada kuyaala magaalada Muqdisho, waxaana Musharaxiinta qaarkood la sheegayaa in ay adeegsanayaan lacago si ay kuraasta ay u tartamayaan ugu soo baxaan.
Doorashada Gudoonka Aqalka sare ayaa ah mid aan si rasmi ah loo saadaalin karin cida ku guuleesaneysa, waxaana maalinta berito oo doorashada dhaceyso la ogaan doonaa cida rasmiga ah ee kusoo baxda Doorashada Gudoonka Aqalka sare.
Daawo Sawirada: Shil ay arday badan ku geeriyoodeen ka dhacay Dalka Talyaaniga